"I-Rotaru - inkohlakalo, i-Allegrova - i-vulgar," - ukuqhubekwa kwehlazo kunye nePugacheva
I nkwenkwezi Iindaba
Kubonakala ngathi uhlazo "ngesikhalazo malunga nePugacheva" luya kuba yimfazwe yangempela yababukeli ngeengcamango zesigaba. Isibheno kuConstantin Ernst ngesicelo sokuhlaziywa kwakhona kwi-repertoire yemikhosi engalindelekanga iphakamisa intsingiselo yokunganeliseki kwi-intanethi.
USergei Sosedov wajoyina ihlazo. Ummangaleli womculo waziwa kubabukeli ukususela kwiintsuku zePenki yePenki. Abamelwane bafumana inhlonipho yabalandeli ngokuvavanya kwabo kunye nokuvavanya. Umlobi weendaba ujwayelene nababukeli banamhlanje: wayeyilungu lejaji ye-TV "Superstar" kunye neprojekthi "X-factor".
Ngokutsho kukaSosedov, ubona ubugebengu ukubonisa uhlobo olufanayo lweenkqubo zoNyaka kaNtsha weNtsha kunye neKlayinal yokuqala kunye ne "Russia". Ngokungafani noMaxim Fadeev, othe wafanisa iinkqubo zomculo zemidlalo kunye neendawo zasemaphandleni ezivela kuma-80, uSosedov uthi ngaloo mihla, ukulungiswa kwemisebenzi yomculo kuthathwa ngokungathí sina:
... kwiminyaka yeSoviet, umhleli womculo wesiteshi somsakazo kwakufuneka ukuba abe ngumfundi wesifundo se-theoretic-composer of the conservatory. Ndikhumbule izibane zeNew New Year, apho kuphela ukuhlaselwa okutsha, iingoma ezintsha kuphela.
USergei Sosedov wagxeka umsebenzi we-Alla Pugacheva namhlanje.
Ngokwe-intatheli-ndaba, i-prima donna ayinanto into yokuyithetha kuluntu:
I-Pugacheva namhlanje ayinanto yokuthetha kumbukeli. Akayiqondi into ebalulekileyo kwimbali yenkcubeko yomculo wehlabathi, akaqapheli ukuba kuyimfuneko ukuba ahlale ekhunjweni labantu abantu-imbali-ukushiya kwaye ingabonakali kuluntu kwakhona.
USergei Sosedov wayethetha ngokugqithiseleyo ngomsebenzi ka-Irina Allegrova noSofia Rotaru
Ummangali womculo akazange ayeke e-Alla Borisovna. USergei Sosedov wabonisa uluvo lwakhe malunga nezinye iinkwenkwezi ezimbini ezenzileyo iminyaka emininzi kwinqanaba lasekhaya. Ngokwe-intatheli, iingoma ezintsha zikaSofia Rotaru azihambelani nesitayela sakhe nonke kwaye zihluke ngendlela engafanelekanga.
Umgxeki ukholelwa ukuba umculi akaqondi into ayiculayo:
Uyayiphulaphula into ayithandayo namhlanje, iyinqaba! Olunye uhlobo loyiko, njenge "Ocean Ocean". Uphazamiseke ngokupheleleyo. Kwiminyaka yakutshanje, uRotaru wakhulula iingoma ezimbili kuphela okanye ezingaphantsi kweengoma ezifanelekileyo - "iNgcintsu eNtsundu" kunye ne "White Dance", yonke into - iplagi ephosakeleyo.
Ewe, ukwakheka kokugqibela kuka-Irina Allegrova kwazisa uSosedov ngokukrakra. Umgxeki wachaza ukuba ukusebenza komculi kwakukuphakama kobutyebi nokungaqondi.
USergei wabiza umculi "onobuncwane, onobuqili, kodwa enomphefumlo". Intatheli yatshutshiswa ngamazwi ka-Allegrova Mide eRussia:
Potoskoy eToscany, ndiza kumisa eMorocco, kum ukusuka elangeni lomnye umntu, ukusuka elangeni lomntu omncinane.
Ndiya eMiami, ndiya kudibanisa neSiteshi seNgesi.
Kwaye ke ekhaya, kwaye kunoko ekhaya. Ndenziwe eRashiya
Ingcaca, ingxoxo enomsindo malunga nokuhlaziya iiprojekthi zeNtsha zonyaka eziqhelekileyo kumashishini angundoqo aziyi kuphelelwa kusasa elizayo. Oku kuthetha ukuba siza kuqhubeka nokubeka iliso kwiindaba zakutshanje kwi-"I-Petition against Pugacheva." 😉
I-Bachelor 2017 I-Russia: Ngubani oza kuba yiqhawe lombukiso wenkathi 5, isithombe
ULena Lenina uceba ukuthatha indawo ye-Xenia Sobchak, ngeli xesha uya kuhlala kwisimiselo
UKate Moss uqhawula umyeni wakhe?
Kwi-scandal ye-Dzhigarkhanyan kunye noVitalina Tsymbalyuk-Romanovskaya, uEvelina Bledans wamxhasa umfazi womdlali
Yaziwa isizathu esivakalayo sokuhamba kukaAndrei Malakhov ukususela kwiShaneli esisodwa: umfazi wombukeli ulindele umntwana
Intombi kaJulia Vysotsky noAndrei Konchalovsky eFransi yayiza kukhutshwa kwisixhobo sokuxhasa ubomi
U-Anna Kournikova kunye no-Enrique Iglesias babonisa kuqala abantwana babo: kwacaca ukuba ngubani na onyana, isithombe
Kutheni abesetyhini abakhulelweyo akufanele babe neentloni
I-jam ye-Aromatic esuka kwi-petals ye roses-i-step-by-step zokupheka kunye nesithombe
Ukubala ubunzima obuninzi?
Imfihlelo yomtshato omhle kwaye uphumelele
Imibongo yeSanta Claus yoNyaka omtsha kubantwana 3, 4-5 no-6-7 iminyaka. Iimpawu ze-nursery ezimfutshane kunye ezimfutshane malunga neSanta Claus ne-Snow Maiden
Uyazi ntoni ngeeyi: iintlobo kunye neentlobo zeeyi
Iimaski ezinepilisi: ezifanelekileyo zokupheka ekhaya zokuqinisa nokukhula kweenwele
Kutheni amadoda engazi ukuba ahlule?
Iimbangela zobomi bentsana kunye neengxaki kunye nendlela yokubanceda bajamelane nayo
Ukuziphatha kakuhle kwiindawo nakwiindawo zoluntu
Ikhukhi zecoleta ngefowuni
Isaladi enomdla kunye nenhle "I-mushroom Glade"
Eyona nto ilungileyo ihlobo
Indlela yokululela ikati ukugaya iingcingo
Ndifanele ndihambe nini kumgqirha?
Ukuphuhlisa imidlalo kunye nomntwana ukuya kunyaka